Elman oo ku guuleysatay koobka Jeneraal Daa'uud
Saturday October 28, 2017 - 16:03:28 in Xiriirka Kubadda Cagta by Nocsom Editor
Kooxda Elman ayaa ku guuleysatay koobka Jeneralaa Daa'uud 2017 kadib markii ay 1-0 kag adkaatay kooxda Jamhuuriya oo ay kulan xiiso leh ku yeesheen garoonka Banaadir.
Kooxda ugu guulaha badan kubadda cagta ddalka 27 sano eee lasoo dhaafay Elman ayaa soo dhaweysay kooxda Jamhuuriya oo heerka labaad ka ciyaarta si cajiib ahna fiinaalka ugu soo baxday, waxaana garoonak aad usoo camiray taageerayaasha labada koox iyo masuuliyiinta xiriirka iyo Wasaaradda dhalinyarda iyo Isboortiga.
Da’yarta Jamhuuriyada ayaa bilowga hore ee ciyaarta iska caabiyay xiddigaha wayaa argga u badan ee Elman,waxayna la qeyb sadeen kubadda.
Kooxda uu hogaamiyo Macalin Cabdi Joon ayaa goolka qura ee ay guusha ka heshay waxaa ka caawiyay xiddiga Nambarka 9 Maxamed Nuur Cusman oo dhaliyay dhamaadka qybta hore ee ciyaarta.
Elman ayaa la hotay koobka Jeneraal Daa’ud 2017 kadib afar sano oo koob la’aan ah, waxaan ugu dambeysay Super Cup-ka kubada cagta oo ay 2013 kaga guuleysatay kooxda Banaadir SC.
Elman ayaa dhanka kale koobka ka sukoow guddoontay 46 milyan oo Shilin Soomaali ah, halka Jamhuuriya ay iyana la hoyatay 23 milyan oo ay kaalinta labaad ku muteysatay.
Halkanka Daawo Sawirada.